ने क पामा जन्मियो नयाँ गुट ! कता जालान् वामदेव ?
२०७५ कार्तिक १८ आइतबार १६:०१:००
प्रदेशको हकमा पनि त्यस्तै छ । २८ पदाधिकारीको टुंगो लागेको छ तर प्रदेश सदस्यहरू मनोनीत भएका छैनन् । जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटी कहिले बन्ने हुन्, अनिश्चित छ ।
एकताको अध्याय नै पूरा हुन नसकेको ने क पाभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण भने तीव्रतर रूपमा हुन थालेको छ ।
०६५ फागुन ५–१० मा सम्पन्न बुटवल महाधिवेशनबाट एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको सूत्रपात गरेको हो । नेतृत्व चुन्न प्रतिनिधिहरूको बीचमा खुलमखुला बाकस थाप्यो ।
आठौँ महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक जीवलाई लोकत्रान्तिककरणमात्र गरेन, गुटहरूलाई बैधानिकता दियो । कम्युनिस्टहरूले अंगीकार गर्दै आएको ‘दुईलाइन सङ्घर्ष’लाई नेतृत्व हत्याउने कसीका रूपमासमेत विश्लेषण गरिदियो ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भएको कार्यगत एकता ०७१ साउन १ मा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशन आइपुग्दा निकै झाँगियो ।
तिनताक नेपाल गुटमा झलनाथ खनालका अतिरिक्त भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, लालबाबु पण्डित, अमृत बोहोरा, बेदुराम भुसाललगायत नेता थिए ।
तर, सचिवालयमा उनको पक्षमा बोलिदिने नेता नभएकाले उनले माग पूरा गराउन सकेका छैनन् । स्थायी कमिटीमा पनि आफ्नो कुरा राख्ने उनको तयारी छ ।
नवौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन काँध हाल्ने नेता हुन्– वामदेव गौतम । आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथलाई सघाए भने नवौँमा ‘क्याम्प’ फेरे ।
आठौँ महाधिवेशन अगाडि उनकै ‘पूर्वमाले क्याम्प’ थियो । नवौँमा आइपुग्दा छिन्नभिन्न भयो ।
नवौँमा किरण गुरूङ, रवीन्द्र अधिकारी, दलबहादुर राना, हरि पराजुलीलगायत केही नेताले मात्रै उनलाई साथ दिने अवस्था बन्यो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीलगायत युवा नेताले साथ छाडे ।
पार्टी अध्यक्ष बनाउन दर्बिलो साथ दिएका गौतम अहिले ओलीलाई साथ छाड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । र, नयाँ ध्रुवीकरणको तयारीमा छन् ।
ओलीसँग गौतमको असन्तुष्टि बर्दियामा चुनाव हारेयता हो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै ‘कान फुकेकाले’ आफू पराजित भएको र त्यसमा ईश्वर पोखरेललेसम्म साथ दिएको उनको आरोप छ ।
त्यसो त अध्यक्ष ओलीसँग ईश्वर पोखरेलसमेतको असन्तुष्टि छ । मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका पोखरेलले रक्षामन्त्रीको शपथ खानुप¥यो ।
सबैलाई फलिफाप बनेको एकता प्रक्रिया पोखरेलका लागि अफापसिद्ध भयो र हुँदाखाँदाको महासचिव पद विष्णु पौडेलका भागमा प¥यो ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शक्तिशाली गुट चलाउँदै आएका छन् । ०४५ सालमा सेक्टर काण्डपछि पार्टी नेतृत्वमा उदाएका प्रचण्ड त्यसयता लगातार नेतृत्वमा छन् । र, उत्तिकै गुट पनि चलाएका छन् ।
उनको गुटमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, अग्नि सापकोटालगायत नेता छन् । र, ने क पा गठन हुँदासम्म त्यसमा फेरबदल आएको छैन ।
पार्टी एकतालाई आधारभूत तहमा पुर्‍याउन निकै कठिनाइ झेलिरहेको ने क पाभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ ।
विशेषतः गएको ५ असोजमा प्रदेश इन्जार्च, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने निर्णय गरेपछि र त्यसमा प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएपछि नयाँ गुटको बीजारोपण भएको चर्चा ने क पाभित्रै हुन थालेको छ ।
त्यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे ।
५ असोजकै निर्णयप्रति पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनालको पनि असहमति पनि थियो । तर, उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’को कुनै उपादेयता देखेनन् ।
०५९ सालमा एकता हुँदा पार्टी महासचिव (प्रमुख) नेता नेपालको पक्षमा थिए वामदेव गौतम । आगामी महाधिवेशनमा सघाउलान् भन्ने नेपालको अपेक्षा थियो । तर, गौतम झलनाथको इष्ट बने र ०६५ को महाधिवेशनमा उनैलाई सघाए ।
०७१ मा पुनः ‘क्याम्प’ फेरेर झलनाथको कित्तामा उभिएकाले नेपालको पार्टी अध्यक्ष बन्ने लालसा ४४ मतले पछि पर्‍यो ।
पार्टी एकतापछि भने कुन कित्तामा उभिन्छन् वामदेव भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ ।
७० वर्षे उमेरहद पाखा लगाइसकेकाले नेतृत्वमा आउने बाटो खुलै छ उनको ।
त्यसको ‘प्रतिशोध’ साँध्न पनि उनी अध्यक्ष ओलीको ‘क्याम्प’मा रहने छैनन् ।
त्यसैले वामदेव अब प्रचण्ड क्याम्पमा जान्छन् भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । र, दुवैलाई साथ दिन आइपुग्नेछन्– पार्टीका चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल ।